SCHNUG DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Gunta yar ee Schnauzer / Pug ey isku dhafan oo isku dhafan
Magaceedu waa Denver. Waxaan ugu magac daray taas sababta oo ah waxay ku dhalatay Denver, PA. Aabbaheed waa Pug daahir ah hooyadeedna waa cawl Miniature Schnauzer. Hooyadeed waxaa laga soo badbaadiyay mid ka mid ah dhallaanka 'puppy-ka' oo dhawaan lagu soo bandhigay Oprah, laakiin waxay ahayd kuleyl markii milkiilaheedii uu gurigeeda geeyay oo Ninkooda Pug uu iska cad inuu u yimid! Laakiin taasi waa caadi, maxaa yeelay hadda waxaan haysannaa Schnug aan jeclahay! '
'Waxaan kaliya haystay Denver wax ka yar usbuuc hadda, laakiin iyadu waa hubaal inay leedahay shaqsiyad weyn horeba. Meel fog ayey uga egtahay Pug — midabkeeda cowska, dabada cute, iyo dabada curlyka ah waa shaki la'aan Baabuur . Laakiin markii aad si fiican u eegto iyada, wejigeeda ma ahan mid aad u qurux badan, wayna leedahay schnauzer wiry timaha!
'Shakhsiyan caqli badan, iyadu waa wax yar kaftan badan. Waxay u muuqataa inay midkood tahay runtii waalan ama runtii daalay. Ma jiro wax weyn dhulka dhexe iyada iyada. Laakiin markasta oo ay igu eegto wejigeeda xiisaha leh waan qoslaa. Iyadu waa hubaal madax adag , laakiin sidoo kale waa mid aad u caqli badan. Waxay baratay sida loo 'fadhiisto' kaliya 2 casharro gaagaaban oo tababar ah. Waxay jeceshahay tagista baarkinka oo ay ku booddo oo ay wax la soo ciyaarto, laakiin sidoo kale waxay ku raaxeysataa fadhi wanaagsan oo salaaxid ah.
Waxa kale ee weyn ee iyada ku saabsan waa inaan haysanno 2 bisado oo dhammaantood way isla socdaan Waxay leefleefaysaa wejiyada bisadaha oo xoogaa ceyrsaneysa, laakiin ma jiraan wax rabshado wata. Dhamaantood way iswada seexdeen. '
Schnug ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Gunta yar Schnauzer iyo Baabuur . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Denver eeyaha Schnug
Gabadhayda waxaa dhawaan la siiyay eey yar oo loogu talagalay hadiyad dhalasho hore waxayna ahayd Schnug isku darka Schnauzer iyo Pug. Kuwani waa sawirro aan soo qaaday labadii maalmood ee ugu horreeyay ee ay guriga nala joogto. Waxay ahayd siddeed toddobaad oo keliya, aad u hyper marka ay soo jeedo . Sida ilmaha dhasha ah wali waxay seexdaa inta badan maalinteeda, laakiin markay kor u kacdo guriga oo dhan ayaa ka og. Iyadu waa a eey shaqsiyad adag hore u jecel yahay inuu ciyaaro dagaal. Mararka qaar iyadu waa mid dagaal badan ku haysa gabadhayda, laakiin waa inaad u sheegtaa iyada yaa xukuma wayna sahlanaan doontaa. Way jeceshahay wax walba calali markaa waa inaad sagxadda nadiif ka dhigtaa. Waxyaabaha ay aadka u jeceshahay waa faro iyo suulasho. Waxaa loogu magac daray Sasha kaartoonka Bratz Girls badankood oo kale eeygan waa a DIVA iyada u gaar ah . '
Sasha eey Schnug eey 8 asbuuc jir ah
'Tani waa Bobby. Isagu waa 4 bilood jir Schnug. Isagu waa qof shakhsiyan ka buuxa oo uusan jeclayn wax ka wanaagsan inuu wajigaaga iyo gacmahaaga leefo! Waxaan qaaday sawiradaan dhawaan ka dib booqasho aan ku tagay caruusada iyo a ku soco xeebta . Maaddaama Bobby uu yahay eeygaygii ugu horreeyay waxaan lahaa a dhaqan yaqaan baxay markii ugu horreysay ee uu guriga yimaado si uu i siiyo talooyin ku saabsan habka ugu wanaagsan ee loo tababarto . Isagu wuu fududay in la tababaro laakiin wuxuu u baahan yahay joogteyn. Wuu ka faa'iideysan doonaa haddii aad wax u sii deyso! Wax badan buu calalinaa, laakiin ilaa hadda wuxuu isku koobay alaabtiisii ​​iyo lafihiisii ​​iyo suulasha qaaliga ah! Waa inaad daawataa sharaabaadyadaada, in kastoo! Waxaan shaqeeyaa wakhti buuxa waxaanan ku noolahay guri dabaq ah. Bobby uma muuqdo inuu taas ka fikirayo. Socodka eeygu wuxuu yimaadaa maalin kasta waqtiga qadada ka dibna wuu seexdaa ilaa aan ka imaado shaqada. Ma ciyo badanaa inta badan mooyee milicsi u gaar ah mooyee. Waa eey farxad badan!
Bobby the Schnug oo ah cunug yar oo 4½-bilood jira oo ku nool Waqooyiga Ireland
madow gorgor gorgor madow iyo bunni ah
2 ey ee dumar ah ayaa wada noolaan kara
Ey eyda Greenland iib ah